seychelles ကော်ပိုရေးရှင်း / IBC ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
seychelles အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်းတိုင်းပြည်များနှင့်တစ်ဦးကျွန်းစုဖြစ်ပါတယ်။ တရားဝင်အမည် "ဆေးရှဲသမ္မတနိုင်ငံ" ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆေးရှဲ 1976 အတွက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကနေလွတ်လပ်ရေးကြေညာခဲ့တယ်။ ၎င်း၏မြို့တော်ဗစ်တိုးရီးယားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆေးရှဲ 115 ကျွန်းများပါဝင်သည်နှင့်ပြည်မကြီးမှအရှေ့ 930 မိုင် (1,500 ကီလိုမီတာ) အရှေ့တည်ရှိသည် အာဖရိကတိုက်။ ဒါဟာ 91,000 ၏ခန့်မှန်းခြေလူဦးရေရှိတယ်။
အားလုံးကော်ပိုရေးရှင်း၏ဆွဲသွင်းပါဝင်နှင့်စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်သောပညတ်တရားဆေးရှဲ IBC အက်ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အက်ဥပဒေအခွန်နှင့်အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြစ်ဆေးရှဲကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ တစ်ဦးဆေးရှဲ IBC, ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေစဉ်းစားခံရဖို့၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဤလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းသေချာအောင်ရမယ်:
• အဘယ်သူမျှမအခွန်: seychelles ကော်ပိုရေးရှင်း (IBC) အဖြစ်ကြာမြင့်စွာ၎င်းတို့သည် (အခြား seychelles IBCs အခွန်အခမဲ့နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုခံရခြင်း၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ) ကို seychelles ၏နယ်နိမိတ်အတွင်း၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ကြဘူးအဖြစ်အားလုံးဝင်ငွေနှင့်အမြတ်အစွန်းအပေါ်အခွန်များနှင့်တာဝန်များကနေတရားဝင်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။ သို့သော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအခွန်ပေးသောနိုင်ငံများရှိနေထိုင်အခြားသူများကိုသူတို့၏အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေကြေညာရန်လိုအပ်သည်။
• လွယ်ကူပြီးမြန်ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်: တစ်ဦးကဆေးရှဲ IBC ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်မြန်ဆန်ထိရောက်ဖြစ်တယ်, တစ်ဦးတည်းသာတစ်ရက်ယူနိုင်ဘူး။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ: တစ်ဦးတည်းသာဒါရိုက်တာနှင့်တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးဆေးရှဲ IBC start ရန်လိုအပ်သည်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: seychelles IBC ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ privacy နဲ့လျှို့ဝှက်ကောင်းတစ်ခုသဘောတူညီမှုရရှိကြသည်။ အများပြည်သူမှတ်တမ်းများအတွင်းရှယ်ယာရှင်ဒါရိုက်တာအမည်များကိုအဘယ်သူမျှမထုတ်ဖော်ရှိပါသည်။
• ဆောင်လုလင်အစုရှယ်ယာ: seychelles IBC ကော်ပိုရေးရှင်းကသူတို့ရှယ်ယာရှင်များ၏နောက်ထပ်သီးသန့်တည်ရှိမှုအဘို့အဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာထုတ်ပေးခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။
• အဘယ်သူမျှမနှစ်ပတ်လည်အခွန် Returns: seychelles IBC ရဲ့နှစ်စဉ်အခွန်ပြန် file မှမရှိကြပါဘူး။
• အနိမ့်သက်တမ်းတိုးကြေး: seychelles IBC ရဲ့အမေရိကန် $ 200 အကြောင်းကိုသာကုန်ကျတစ်ဦးအနိမ့်နှစ်စဉ်ကြေးရှိသည်။
seychelles IBC ရဲ့ဆိုပြီးသားရှိပြီးသားကော်ပိုရေးရှင်းဆင်တူမဟုတ်ကြောင်းထူးခြားတဲ့အမည်အားကောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
seychelles IBC ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကို server ကို request များနှင့်တာဝန်ရှိသူတဦးကသတိပေးချက်များလက်ခံရရှိနိုင်ရန်အတွက်ဒေသခံတစ်ဦးရုံးနှင့်ဒေသခံမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်ရှိရမည်။ အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာအဓိကလိပ်စာရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
seychelles IBC ရဲ့တဦးတည်းရှိသည်ရန်လိုအပ်သည် အစုစပ်ပါဝင်သူ.
seychelles IBC ရဲ့တဦးတည်းညွှန်ကြားရေးမှူးရှိသည်ဖို့လိုအပ်သည်။ non-နေထိုင်သူဒါရိုက်တာများခွင့်ပြုထားပါသည်။
တစ်ဦးဆေးရှဲ IBC များအတွက်စံအခွင့်အာဏာမြို့တော် $ 100,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုး 1 ရှယ်ယာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကဆေးရှဲ IBC မဆိုတာဝန်အပေါ်အခွန်, ဝင်ငွေ, ဒါမှမဟုတ်အမြတ်အစွန်းကိုပေးဆောင်ခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးဆေးရှဲ IBC ရှယ်ယာရှင်သူသို့မဟုတ်သူမအတွက် IBC ထံမှရရှိဝင်ငွေပေါ်မဆိုအခွန်ပေးဆောင်ရန်မထားဘူး။
တစ်ဦးကဆေးရှဲ IBC နေသမျှကာလပတ်လုံးက (အခြားဆေးရှဲ IBC`s တွေနဲ့စီးပွားရေးတံခါးအထဲသို့ဝင်ခြင်းငှါ, မှလွဲ. ), ဆေးရှဲ၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများမဆိုအမျိုးအစားအတွက်ဆက်ဆံပါဘူးအဖြစ်အခွန်လွတ်ကြောင်းတစ်ခုကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ တစ်ဦးဆေးရှဲ IBC အားလုံးကိုကင်းလွတ်ခွင့်ဆွဲသွင်းပါဝင်သည့် နေ့မှစ. 20 နှစ်ပေါင်းကြာချိန်များအတွက်အင်အားသုံးနေဘို့ပညတ်တရားသည်လည်းခွင့်ပြုပါတယ်။
တစ်ဦးဆေးရှဲကော်ပိုရေးရှင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အဆိုပါနှစ်စဉ်ကြေး $ 200 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးရှဲ IBC ရှယ်ယာရှင်များ, ဒါရိုက်တာများနှင့်ပိုင်ရှင်များ၏အမည်များကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ကြသည်မဟုတ်။
seychelles IBCs နှစ်စဉ်အခွန်ပြန် file မှမလိုအပ်ပါ။
နှစ်စဉ်ယေဘုယျအစည်းအဝေးအားလုံးဆေးရှဲ IBC ရဲ့အဘို့လိုအပ်ပါသည်။
ဆွဲသွင်းပါဝင်များအတွက်ဆေးရှဲ IBC မှတ်ပုံတင်နှစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်တဦးတည်း၏စုစုပေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်, ဆွဲသွင်းပါဝင်မှတ်ပုံတင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနှစ်ဆယ်လေးနာရီတစ်ကာလအတွင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
သို့သျောလညျး, (Notary နှင့် Apostil) အပိုဆောင်းလက်မှတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်း2ရန်နောက်ထပ်4ယူနိုငျသညျ, အတိအကျကိုအချိန်ကိုက်ကွဲပြားနိုင်သည့်သက်ဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရုံးများကနေထိုင်ခဲ့သည့်အချိန်နှင့်အတူလုပ်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်။
အဆိုပါရှယ်ယာရှင်များ, ဒါရိုက်တာများနှင့်ပိုင်ရှင်များ၏အမည်များကိုအများပြည်သူစံချိန်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဖြစ်သကဲ့သို့ paid အဘယ်သူမျှမအခွန်အခများ, နှစ်စဉ်အခွန်ပြန်, လွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်စွာပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဆွဲသွင်းပါဝင်များအတွက်လိုအပ်သည့်တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်, privacy ကိုအဘယ်သူမျှမ File: တစ်ဦးကဆေးရှဲ IBC အပါအဝင်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်အားလက်ခံတွေ့ဆုံ , ဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာအပိုဆောင်း privacy ကိုများနှင့်တစ်ဦးအနိမ့်နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးကြေးများအတွက်ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။